पोखरा मुलुककै पहिलो फ्री वाइफार्इ जोन ! – Recent Nepal News
पोखरा मुलुककै पहिलो फ्री वाइफार्इ जोन !	पोखरा,पुस २५ – पोखरा मुलुककै पहिलो फ्री वाइफार्इ जोन हुने भएको छ । पोखराको छिनेडाँडामा टेलिकमको एक्सचेन्ज काउन्टरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले पोखरालाई नेपालको पहिलो फ्री वाइफाइ जोन बनाउने बताएका हुन्।
Previousएनटिसीको प्रिपेड मोवाइलका ग्राहकलाई ‘क्रेडिट ब्यालेन्स’को सुविधा !
Nextआतंकवादीको आक्रमणकवाट तीन भारतीय सैनिकको मृत्यु